नीतालाई लाग्यो बेहुली बन्ने रहर, बेहुला को हुन् ? « Ramailo छ
नीतालाई लाग्यो बेहुली बन्ने रहर, बेहुला को हुन् ?
प्रकाशित मिति : Dec 11, 2019
फिल्म नगरीमा बिहेको सिजन चलिरहेको छ । नायिका ऋचा शर्माले हालै आफ्नो प्रेमिसँग बिहे गरिन् । अर्की नायिका आँचल शर्मा पनि प्रेमीसँग यही वर्ष बिहे गर्ने तयारीमा छन् । यतिबेला फिल्म नगरीमा अविवाहित नायिकाहरु बिबाह गर्ने मनस्थितिमा छन्, भन्दा फरक नपर्ला ।
यस्तै मध्येमा नायिका नीता ढुंगानाले आफुलाई बेहुली बन्न रहर लागेको कुरा सार्वजनिक गरेकी छिन् । फिल्म या म्युजिक भिडियोको बेहुलीको भेषको फोटो राख्दै नीताले ‘तिम्रो घरमा बेहुली भएर आउन मन छ’, लेखेकी छिन् । तर नीताको बेहुला चाहिं को हुन् त ?
‘तर कसको घरमा मलाई थाहा छैन्’, नीता आफैंले स्टाटसमा उल्लेख गरेकी छिन् । नायक आमेश भण्डरीसँगको ब्रेकअपपछि नीताले आफुलाई सिंगल रहेको बताउँदै आइरहेकी छिन् । बेहुली बन्ने ईच्छा व्यक्त गरेकी नीताले बेहुला चाहिं कहिले सार्वजनिक गर्छिन् होला त ?